Izindaba - Ukubaluleka Kwezinyathelo Ze-Sanding E-Woodworking
Izindlela zokugaya zibandakanya ukugaya okomile, ukugaya amanzi, ukugaya uwoyela, ukugaya i-wax nokugcoba umuthi wokuxubha. Ukugaya okomile kungahlukaniswa kube ukugaya okunokhahlo, ukugaya okuyisicaba nokugaya okuhle. Ukugaya okukhohlisayo kuvame ukusetshenziselwa ukususa uboya bezinkuni, izibazi, amamaki e-glue namamaki wepensela kusuka kokungenalutho lokhuni ngaphambi kokuphathwa kwe-Bai, ngenkathi ukugaya okuyisicaba kuvame ukusetshenziselwa ukugaya indiza enkulu ngendwangu yesihlabathi kanye ne-sandpaper egoqwe ngamabhuloki amancane okhuni noma irabha eqinile, ngakho ukuthi umphumela wokululama ungcono, ukugaya okuhle kusetshenziselwa i-putty, ukufaka upende uphawu, ukufanisa umbala nokugcwaliswa kombala ngemuva kokwelapha ngakunye okuphakathi, ukugaya isihlabathi kudinga ukuqaphela. Umshini wamanzi ukusebenzisa i-sandpaper ecwiliswe emanzini (noma amanzi anensipho) ukugaya. Ukugaya amanzi kunganciphisa amamaki wokuguga, kuthuthukise ukushelela kwengubo, futhi kugcine abasebenzi kanye ne-sandpaper.
Izinyathelo zeSanding zidlala ngaphansi kwezindima ezintathu ezibalulekile:
Cha 1: Ukususwa kwe-burrs, ukungcola okunamafutha ebusweni be-substrate
Cha 2: Ebusweni be-putty esikiwe, ubuso ngokuvamile bunzima futhi budinga ukuba busongwe ukuze kutholakale indawo ebushelelezi, ngakho-ke ukusikwa kwesihlabathi kunganciphisa ubungqabavu bendawo yomsebenzi;
Cha 3: Thuthukisa ukunamathela kwengubo. Ngaphambi kokufafaza ifilimu entsha kapende, ngokuvamile kuyadingeka ukupholisha ifilimu yakudala kapende ngemuva kokumiswa kanzima. Ngoba ukumboza kunamathela ompofu endaweni ebushelelezi ngokweqile, ukunamathela komshini wokumboza kungathuthukiswa ngemuva kokupholisha.
Kufanele sikhethe i-grit efanelekile ngokususelwa kuzinyathelo ezahlukahlukene ze-sanding kanye nezidingo ze-sanding. Ngokuvamile, singalandela imiyalo engezansi:
Umzimba Omhlophe Oqinile Wokhuni: I-180 # Grit ----- 240 # Iphepha le-Grit sanding
I-plywood noma ungqimba ongaphansi we-primer sanding: 220 # Grit ----- 240 # Grit sanding paper
Isinyathelo sesibili se-primer ngisho: 320 # Grit ----- 400 # Grit sanding paper
I-Surface primer noma upende wokuqeda: 600 # Grit ----- 800 # Grit sanding paper
Wokucwebezelisa upende sekugcineni: 1500 # Grit ----- 2000 # Grit sanding iphepha